Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Adeegyada Warka » Timaha ugu Fiican Waqooyiga Ameerika: La kulan stylists
Ururka Quruxda Xirfadleyda (PBA) wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo guuleystayaasha 2021 -ka Abaalmarinta Timaha Waqooyiga Ameerika (NAHA), oo ah tartanka ugu qiimaha badan warshadaha quruxda ee Waqooyiga Ameerika. NAHA waxay maamuustaa fannaaniinta sare ee warshadaha quruxda iyo kartida hal -abuurka kuwaas oo riixa xuduudaha xirfadda iyo hal -abuurka. In ka badan 30 sano, kumanaan farshaxanno karti leh ayaa NAHA u adeegsan jiray madal ay ku soo bandhigaan shaqadooda si ay ugu guuleystaan ​​NAHA damaca leh.
Munaasabadda sharafta leh ayaa lagu qabtay Sabtidii, Ogosto 29 -keedii Mandalay Bay Resort iyo Xarunta Shirarka intii lagu jiray Cosmoprof North America (CPNA) ee Las Vegas., Nevada.
NAHA waxay u dabbaaldegtaa kartida hoggaamineed ee warshadaha waxayna soo bandhigtaa 15 qaybood oo heer sare ah oo ku aaddan timaha iyo farshaxanka qurxinta, oo ay ku jiraan Salon -ka cusub ee Dhiirrigelinta leh iyo qaybaha abaalmarinta baraha sannadka.
"Kani wuxuu u ahaa NAHA sanad aan horay loo arag, haddana hal -abuurka sare loo qaaday iyo farshaxanka muuqda ee la matalay ayaa ka mid ahaa kuwii ugu cajiibka badnaa taariikhda tartanka," ayay wadaagaan Nina Daily, Agaasimaha Fulinta PBA. "Warshaduhu waxay u soo urureen inay tamarta u geliyaan hal -abuurnimada aasaasiga ah iyo saaxiibtinimada, mana ku faani karno kuwa ku guuleysta, kuwa ugu dambeeya iyo qof kasta oo xiise iyo tamar badan geliyay sidii caawa guushaas u noqon lahayd."
NAHA 2021 waxaa martigaliyay A-list stylist stylist iyo Living Proof Global Creative Director Michael Shaun Corby waxaana soo bandhigay bandhigyo farshaxan Silas Tsang iyo Kooxda Ulta Beauty Pro. Dhacdadu waxay ahayd mid si toos ah loo daawanayey oo la heli karo iyadoo la dalbanayo kuwa aan awoodin inay si shakhsi ah uga soo qaybgalaan.
Ka sokow xafladda abaalmarinta, NAHA 2021 waxaa ka mid ahaa soo dhaweyn rooga gaduudan oo lagu soo dhaweynayo gabagabadii NAHA, kuwii hore NAHA ku guuleystay, kuwa horseeday quruxda, iyo dadka caanka ah ee bandhigga, waxaana marti ku ahaa Aasaasaha Warbaahinta Salon Casri ah iyo Anne Morattoalong oo leh astaanta warshadaha, baraha, tima jare iyo u ololeeye Rodrick Samuels.
Abaalmarinta NAHA ee 2021:
Stylist Stylist of the Year- Danielle Keasling
Baraha Sanadka- Sam Villa
Timo-jarista- Stephen Moody
Timo-qurxinta Sanadka- Silas Tsang
Salon-ka dhiirrigelinta leh ee Sannadka- Salon Midabka Square + Spa
Farshaxaniistaha Sanadka- Nohemi Capetillo
Timaha Ragga ee Sanadka- Nieves Almaraz
Timaha ardayga sannadka- Alisha Kemp
Qaabaynta iyo Dhameystirka- Nick Stenson
Kooxda Sanadka- Julie Vrie